DHAGEYSO:- Midowga yurub oo tageeraya Beeralayda Puntland
Beeralayda Puntland ayaa sheegtay in mashruuca horumarinta timirta Puntland uu meel wanaag san marayo iyadoo lagu tar tan siinayo dhawaan Hay,adaha mashruucan loo xilsaaray sida ay wasaaradu sheegtay. mashruucan ayaa Midowga Yurub waxa uu ku maal galinayaa 1malyan oo doolar. Beeralayda ayaa wasaarada ka cosdsatay danka kale in ay samayso biyo xireeno si looga faa,iidaysto...
DHEGAYSO:- Xildhibaanad ka tirsan barlamaanka Somaliland oo hadashay xiisada sanaag
Qaar kamid ah xildhibanada Barlamaanka Maamulka somaliland ayaa ka hadlay xiisada cusub ee ka dhex taagan maamulada Puntland iyo somaliland ee gobalka sanaag la xiriirta. Xaliimo Yuusuf oo kamid ah Xildhibaanada somaliland ayaa ka haddashay Xiisadaha ka tagan gobalada sool iyo Sanaag. http://www.allgalgaduud.net/wp-content/uploads/2019/06/xaliimo-xuseen-yuusuf-somlilad.mp3 The...
AKHRISO:- Burcad Soomaali Ah Oo Ganacsade Soomaaliyeed Ku Dilay Koonfur Afrika
Boliska Dembi-baarista ee magaalladda Port Elizabeth ee dalkaasi ayaa baadi-goobaya Burcad dil u geysatay Muwaadin Soomaali ah oo la oran jirey Aadan C/qaadir Jaamac oo 32-jir ahaa. Kolonel Priscilia Naidu oo ka tirsan Boliska dalkaasi ayaa sheegay inuu Marxuumkaasi abaarihii 7-dii fiidnimo ee habeenkii Talaadada ee la soo dhaafay uu xiray Dukaankiisa, kadibna la toogtay...
DHAGEYSO:- Madaxda Puntland iyo Somaliland oo Fariin Culus loo diray
Guddoomiyaha Ururka Midnimada Maakhir, Cawad Cabdiraxmaan Xirsi, oo waraysi gaar ah siyeey Radio Daljir ayaa ka hadlay xaaladda gobalka Sanaag iyo maxaabisti dhawaan ay is dhaafsadeen Puntland iyo Somaliland. Ugu horeyn Cawad ayaa dhaliilay qaabka ay Puntland iyo Somaliland maxaabista isku dhaafsadeen iyadoo ay weli jirto colaad u dhexaysa labada dhinac isla markaana degaano...
DAAWO:- Sidee looga Ciiday magaaladda Caabudwaaq
The post DAAWO:- Sidee looga Ciiday magaaladda Caabudwaaq appeared first on Allgalgaduud.Com. ...
DAAWO:- Wararkii ugu dambeyeey ee xirirka xuumaday ee kenya iyo Somalia
The post DAAWO:- Wararkii ugu dambeyeey ee xirirka xuumaday ee kenya iyo Somalia appeared first on Allgalgaduud.Com. ...
AKHRISO:- Faah Faahin:-Askari Gabar Yar Ku Dilay Jowhar Oo Gacanta Lagu Dhigay
Wararka Allgalgaduud ee Magaalada Muqdisho ay ka heleyso Magaalada Jowhar ee Caasimadda dowlad Hirshabeelle ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi Maanta Askari ka tirsan Ciidanka dowladda uu gabar yar ku dilay. Dilkan loo geystay gabadha yar oo da’ ahaan jirtay 9-sanno ayaa waxaa uu ka dhacay Suuq ku yaalla Jowhar,kaasi oo lagu iibiyo Qaadka. Wararka ayaa intaasi waxaa...
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, Ahna kusimaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa dhambaal hambalyo ah u diray ummadda Islaam ka ah, shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland munaasibadda ciidul fidriga awgeed. Afhayeenka Madaxtooyada Puntland Jaamac yuusuf Jaamac Deberaani oo ku...
DHAGEYSO:- Siyaasi Qurbaawi oo ka hadlay Arrimo Xasaasi ah
Dr Siciid Axmed Cali oo Shir jaraa’id qabtay ayaa ka hadlay Arrimo baddan oo ay kamid yihin Maxaabistii ay isdhafsadeen Puntland iyo somaliland iyo Ciidamadi ka goostay somaliland ee la dalacsiyeey. Ugu horeyn qurbaawi ayaa Hambalyo Munaasabada Ciidul fidriga ah u diray dhamaan shacabka somaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland. Dhinaca kale Siyaasi Qurbaawi ayaa ka hadlay...